Obama: Saameynta Duufaanta Irene
Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in shacabka Maraykanku ay muddo badan dareemi doonaan saameynta raadadkii burburka Irene.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ka digay in saameynta duufaantii darneyd ee Irene ee ku dhufatay dalkan Maraykanka ay hadda bilaabaneyso in la dareemo. Ku dhowaad 20 qof ayaa ku dhimatay, burburka hantiyeedna waxaa lagu qiyaasay balaayiin dollar.
Inkastoo awoodda duufaanta Irene ay daciiftay, kana gudubtay qaar ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Maraykanka, haddana madaxweyne Obama waxa uu ka digay in gobollada xeebta Bariga Maraykanku ay in muddo ah dareemi doonaan saameynta duufaankaasi.
Madaxweynuhu waxa uu hadalkan ka jeediyay jardiinka Rose Garden ee Aqalka Cad, waxaana dhinac taagnaa xoghaha amniga gudaha Janet Napolitano iyo agaasimaha hay’adda maareynta masiibooyinka ee federaalka Craig Fugate.
Xubnahaasi iyo saraakiil kale oo qaranka ka tirsan waxay warbixin ka siinayeen madaxweynaha khasaarihii ay geysatay duufaanta Irene. Madaxweyne Obama ayaa habeenkii jimcaha ahaa ku soo laabtay Washington, ka dib markii uu fasax ugu maqnaa gobolka Massachusets, isagoo saacado badan ka soo hormaray wakhtigii la sugayay.
Madaxweyne Obama ayaa ku booriyay dadka inay dulqaad muujiyaan, isagoo xusuusiyay in qiimeynta iyo dayactirku ay wakhti qaadan doonaan.
Duufaanta Irene waxay burbur lixaad leh ka geysatay gobolka North Carolina maalintii sabtida ahayd, waxay dhalisay daadad iyadoona dhulka dhigtay geedo badan.
Inka badan afar milyan oo guryo iyo goobo ganacsi isugu jira ayaa koronto la’aan ku dhacday, laga bilaabo North Carolina iyo laaxuduudda Maraykanka iyo Canada.
Airabooro ku yaalla gudaha iyo nawaaxiga magaalada New York ayaa la filayaa inay xirnaadaan ilaa isniinta maanta ah.
Saraakiishu waxay ka digeen daadad hor leh, iyadoo biyihii ka dhashay duufaantu ay weli ku sii qulqulayaan webiyada. Waxay kaloo sheegeen in geedo badan dhulka dhici doonaan maadaama ciiddi salkoodu haysay ay qoyday.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu la socon doono xaaladaha, uuna gacan ka siin doono saraakiisha federaalka iyo kuwa gobolkuba taageerada ay u baahan yihiin. Wuxuuna aad ah u ammaanay hawlihii gurmadka deg degga ahaa ee la sameeyay intii ay dabeyshu socotay.